नेप्से परिसूचक ५० अंकभन्दा धेरैले बढ्याे | Samajik Khabar
Home अन्य नेप्से परिसूचक ५० अंकभन्दा धेरैले बढ्याे
नेप्से परिसूचक ५० अंकभन्दा धेरैले बढ्याे
काठमाण्डाै – यो हप्ताको ३ दिनमा नेप्से परिसूचक ५० अंकभन्दा धेरैले बढेको छ । साेमबार १८ अंक र आइतबार १६ अंकले बढेको परिसूचक आज पनि १६ दशमलव २३ अंकले बढेको छ ।
नेप्से बढेर १२ सय १६ दशमलव ९२ विन्दुमा पुगको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ । होटल र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक आज सबै समूहको उप–सूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै नीर्जीवन बीमा समूहको सूचक ८६ दशमलव ५६ अंकले बढेको हो ।
कारोबार रकम पनि आज १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आज १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरका ३८ लाख ८० हजार कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको आज सबैभन्दा धेरै १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत कमाएका छन् । वमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलगायत कम्पनीका शेयरधनीले पनि झण्डै १० प्रतिशत कमाएका छन् ।
बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडका शेयर लगानीकर्ताले भने ४ प्रतिशत गुमाएका छन् ।
Previous articleकतै यस्तो गल्ती त गर्दैहुनुहुन्न ? यस्ता गल्तीले बनाउँछ तपाईंको स्मरण शक्ति कमजोर
Next articleजाडोमा औँला सुन्निने समस्या छ ? यसरी बच्न सकिन्छ